Ngabe uke wahlola imibiko yakho ye-Google Analytics ukuze uthole abathumeli abangajwayelekile kakhulu bevela emibikweni? Uya kusayithi labo futhi akukho okushiwo ngawe kepha kukhona ithani lezinye izinhlinzeko lapho. Qagela? Labo bantu abakaze babhekise ithrafikhi kusayithi lakho.
Ukube awuzange uqaphele kanjani -Google Analytics kusebenze, ngokuyisisekelo i-pixel ingezwa kuwo wonke umthwalo wekhasi obamba ithoni ledatha bese ulithumela kunjini ye-Google Analytics. I-Google Analytics bese idlulisa imininingwane bese iyayihlela kahle ibe yimibiko oyibhekile. Awukho umlingo lapho!
Ngokwethembeka konke, angiqiniseki ukuthi kungani iGoogle ingakaqali nje ukugcina i-database yabathumela ogaxekile. Yeka isici esihle esingaba sesikhulumi sabo. Njengoba kungekho ukuvakasha okwenzeka empeleni, laba bagaxekile benza umonakalo ngemibiko yakho. Komunye wamakhasimende ethu okuthumela ugaxekile kwenza ngaphezu kwe-13% lakho konke ukuvakashelwa kwabo kwamasayithi!
Kukhona uhlu olusha lwama-spam okuthumela ku-Github olusetshenziswa abasebenzisi bePiwik futhi luhle kakhulu. Ngidonsa lolo hlu ngokuzenzekelayo ngezansi futhi ngilufomathe kahle ngesitatimende se-OR ngemuva kwesizinda ngasinye (ungalikopisha bese ulinamathisela kusuka endaweni yombhalo engezansi ku-Google Analytics):
Uzobona amathani emibhalo yeseva nama-plugins ngaphandle lapho ukuzama ukuvimba abathumeli bogaxekile kusuka kusayithi lakho. Ungazihluphi ngokuzisebenzisa… khumbula ukuthi lokhu bekungekhona ukuvakasha kwangempela kusayithi lakho. Izikripthi laba bantu abazisebenzisayo zifake iphikseli ye-GA ngqo kusuka kuseva yabo futhi azange zifike nakwezakho!
Yazisa: Ukubhuka okuku-inthanethi, ukubhuka, kanye nengxenyekazi yokukhokha